Taxane Champion Forex Tusiyaha - Forex Muujiyeyaasha Download
Home MT4 Muujiyeyaasha Taxane Champion Forex Tusiyaha
Taxane Champion Forex Tusiyaha
Taxane Champion Forex Tusiyaha muujinaysaa arrimuhu hadda dega ee suuqa Forex ee. Waxaa loogu talagalay intraday iyo ganacsatada muddada dheer. Waxaa laguma talinayo scalpers tan ma waxaa loogu tala galay in la siiyo calaamadaha saxda ah marka qiimaha suuqa beddelo by qadar yar. Tani waa doorasho fiican ee bilowga ah.
tilmaanta leh oo dhan oo laba laba lacag iyo wakhti dhan u shaqeeyo. Isbedelka of cayiman ayaa saamayn ku yeelan doonaa oo keliya heerka ay tilmaanta siinayaa calaamadaha ay. Marka la isticmaalayo waqti go'an oo dhagan, tilmaanta waxay doonaan in la siiyo calaamadaha inta badan marka la isticmaalayo waqtiga dheer.
tilmaame ma rinjiyeeyeen iyo hufnaan ku wareegsan yahay 85%. Waxaa la qorsheeyay in sidan oo kale in ay tahay awoodaan in ay ogaan ah oo tilmaamaya wixii isbeddel ah arrimuhu suuqa yar. Si ka duwan inta badan tilmaamayaasha lulid ah, tilmaamahan waa inay awoodaan inay si cad u muujiyaan retracements ee isbedelka suuqa.
The tilmaame Taxana Champion waxaa soo bandhigay shaxda hoos ku gaar ah shaxda ugu weyn ee ganacsiga. shaxda tilmaamayaasha waxaa loo qaybiyaa laba qaybood oo ay dhex-dhexaad ah (eber) line. sarajooggiisu labada qaybood ee kala duwan sida ay dhererka ulood oo dhinaca kasta. On dhinaca midigta ee shaxda tilmaame ee, waxaad arki doontaa miisaan waa positive kor ku khadka eber iyo taban ka hooseeya xariiqda eber. Qiimaha ugu sareeya ee dhinaca wanaagsan ma kiisaska intooda badan waa loo siman yahay si qiimaha qiimaha ugu yar negative.
tilmaame ayaa mas'uul ka ah jiilka of baararka cagaaran, iyo kuwo gaduud ah oo ku saabsan labada dhinac ee khadka dhex-dhexaad ah. The baararka cas ayaa tilmaamaya in uu jiro a arrimuhu u ekaa guud oo loo sameeyay hoos line ee eber halka qataarrada cagaaran ayaa tilmaamaya in uu jiro a arrimuhu guud weynaydba qiimaha suuqa oo loo sameeyay dhinaca sare ee khadka eber. Haddii aad eegto si dhow waxaad ka heli doontaa in iyo dhaqdhaqaaq yar qiimaha suuqa waxaa ka muuqataa on tilmaanta. Tusaale ahaan, haddii ulood oo la soo bandhigay waa cagaar muujinaya uptrend ah iyo qiimaha suuqa hoos by qadar qaar ka mid ah la taaban karo ka gaareen laambadood oo qaar ka mid ah ka dibna uu bilaabo inuu mar kale loo kordhiyo, this laga arki doono dhererka gudban on shaxda tilmaame ee.
lagugu tuday sawirka.1. The tilmaame Forex Taxana Champion.
The calaamadaha of tilmaame waxaa loo arkaa in ay kala guurka ah inta u dhaxaysa qataarrada midabo kala duwan. Marka dhererka gudban bilaabo inuu hoos iyo inay sidaas sameeyaan muddo dheer (baararka dhowr muujinaya hoos u dhac xiriir ah meelaha ay), waxa uu muujinayaa in dhaqankan cusub ee qiimaha suuqa waxaa soo rogeen in la beddelo. Si kastaba ha ahaatee ganacsade ah waa in ay sugaan ilaa midabka ah ee ulaha gudban ka beddesho.
Isticmaalka tilmaame Forex Taxana Champion
Marka Ganacsi ganacsade ah waa in ay maskaxda ku riday waxyaabaha soo socda:
1. Marka midabka ah ee ulaha gudban ka badala ka cas cagaaran, waa waqti ay ku meel iibsan a.
2. Marka midabka ah ee ulaha gudban ka bedeli ka cagaaran si cas, waa waqti ay ku meel iibiyay a.
ganacsade waa in had iyo jeer in ay ka taxadaraan of dhererka gudban shaxda tilmaamayaasha.
1. Amarada waa in lagu rakibaa kaliya bar labaad ama kan saddexaad ee shaxda tilmaame ee la aasaasay halkii ugu bar ugu horeysay.
2. ganacsiga No waa in lagu rakibaa ka dib markii bar afraad.
3. All Xirfado waa in ay leeyihiin khasaaro stop ah iyo faa'iido qaadataan a.
Marka ay yimaadaan si ay u qaataan macaashka, ganacsade ah waa in meel faa'iido ka qaadataan a at 20pips iyo stop khasaare maalinta dhibic ugu hooseeya ee la soo dhaafey. Si kastaba ha ahaatee, haddii mid ka mid ahaa joogsiyada lagu dhufto isla markaana dhererka baararka tilmaame ee uu bilaabo inuu hoos u, ganacsade ah waa in la xiro amarka iyo sugto mudada si ay u bilaabaan kordhaya mar kale meelo si la mid ah.
Fig.2. Saarid amarada la isticmaalayo Tilmaame Forex Taxana Champion.
Taxane Champion Forex Tusiyaha waa Metatrader a 4 (MT4) tilmaame iyo nuxurka tilmaame Forex ee waa in aan baddalno xogta taariikhda wxbarashada.
Taxane Champion Forex Tusiyaha siinayaa fursad ay ku ogaan dhegyadii kala duwan iyo astaamaha isbedbeddelka sicirka kuwaas oo aan la arki karin in ay isha qaawan.
Sidee si loo soo dajiyo Taxana Champion Forex Indicator.mq4?
Download Taxana Champion Forex Indicator.mq4
Copy Taxana Champion Forex Indicator.mq4 aad Metatrader Directory / khubaro / tilmaamayaasha /
Right click on Taxana Champion Forex Indicator.mq4
Tusiyaha Taxana Champion Forex Indicator.mq4 waxaa laga heli karaa aad Chart
Sidee Xagga Metatrader saar Taxana Champion Forex Indicator.mq4 4 Chart?
article PreviousMax istaago V1 Forex Tusiyaha
Next articleUltimate Buy iibi Secret Tusiyaha
BB histogaraam Forex Tusiyaha
Taxane Trading Forex Tusiyaha
BB histogaraam Forex Tusiyaha Aug 23, 2019
Taxane Trading Forex Tusiyaha Aug 20, 2019